TIDE: Kubatana, Kubatanidzwa, Kupa vamwe, Kunzwira tsitsi | Martech Zone
TIDE: Kubatana, Kubatanidza, Kugovana, Kunzwira tsitsi
Muvhuro, Mbudzi 6, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndanga ndichiverenga mabhuku mashoma eazvino (kurudyi). Mabhuku ese ari maviri akanaka mabhuku ekukunda mamwe easina kunaka bhizinesi.
Ino inguva yechipiri ini ndichiverenga "Rudo ndiye Anouraya App". Ini ndinofanira kunge ndichiiverenga mwedzi yega yega. Ini ndinoda kufunga nezvayo seiyo 'hippy' yemabhizinesi mabhuku. Ndezvechokwadi nezvekuvaka hukama hwakakura nevaya vanhu vakakukomberedza. Kunetseka nezvevanhu kutanga, saka haufanire kunetseka nezve bhizinesi rako.
Silos, Zvematongerwo enyika uye Turf Hondo ibhuku rakanakisa futi. Ndezvechokwadi nezve kudzora kutarisisa kwevashandi vako kubva kune mumwe nemumwe uye kuisa pfungwa dzavo pane zvakajairika zvinangwa zvesangano.
Ndakauya nechidimbu changu chinoratidza mabhuku ese ari maviri… TIDE
Kubatira pamwe - kushanda sechikwata kunopa kutenga-mukati uye kugona. Isa magumo kumaitiro anokurudzira kupokana uye zvematongerwo enyika. Vanhu vasingakwanise kushanda muchikwata havasi kutsvaga kunze kwekambani, vari kuzvitsvaga vega. Hira uye kusimudzira vatambi vechikwata.
Kuisirwa - kusanganisira vatengi vako (vemukati nevekunze) ichagara ichivandudza mhando yezvigadzirwa zvako nemasevhisi.
Kugovera - tendera nyanzvi dzawakatora kuti dziite sarudzo uye dzibate ivo vachizvidavirira.
Tsitsi - nzwisisa nzira dzekuvharika, nzvimbo dzinorwadza, uye kusashanda kwesangano uye nzwira tsitsi avo vatengi nevashandi vanofanirwa kutsungirira.